Ogaden News Agency (ONA) – Ururka OYSU faraca Eastern cape KA oo doortay xooghaye cusub
Ururka OYSU faraca Eastern cape KA oo doortay xooghaye cusub
Posted by ONA Admin	/ May 11, 2011
Ururka OYSU laanta gobolka Eastn Cape ayaa 10.5.2011 shir balaadhan uga furmay xafiiska magalada Pe xafada Kostn. Shirka ayaa waxaa furmay abaarihii 7.30 salada duhur xoghayiihi ururka Maxamad yare. Ka dib waxaana sidii caadada aheyd lagu soo dhaweyey sheekh Xuseen haybe oo wacadi diini ah qiimo badana ka soo jeediyeye goobta. Sheekha ayaa ku talimaamay dagalka ka socoda Ogadenia inuu yahay mid xaq ah u dhexeeya shacab la gumaysto oo xaq u dirir ah oo muslimiin ah iyo gumaysato, sidaa darteed ay waajib ku tahy ruux walboo muslim ah inuu ka qeyb qaato halgankaa.
Waxaa lagu soo dhaweeyay ka dib halgame Cumar Mahamud oo ka hadlay waxa qabadka ururka iyo xaaladaha ka aloosan caaalmka gaar Koonfur Afrika. Waxaa intaa ka dib lagu soo dhaweyey hogaanka arimaha bulshada ee jaaliyada JOKA mudane Xassan Cabdi ow-Nur (Xassan qubi) oo shirka lagu marti qaaday. Wuxuu u soo jeediyey xubnihii fadhiyay shirka khudbad dheer oo qiro leh oo taabaneysa dhinacyo badan. Waxaa hadaladiisi ka mid ahaa; nin ayaa geesinimo lagu amaani jiray. Wiil uu adeer u yahay ayaa ku yidhi; adeer raga maxaada dheertahy oo laguu dhahaa waa geesi? Wuxuu ku yidhi; adeer farteyda qaniin ana taada ii dhiib. Wiilkii ayaa qaniinay, isagoo fartiisiina uu u dhiibay inuu qaniino adeerkii. Midwalba tagtii. Wax yar kadib ayuu wiilkii cabaaday. Wuxuu yidhi ninkii; adeer geesinimada laguu sheegi waa intaa un. Inaad adkeysato daqiiqado. Sidaa darteed ayuu yidhi Xassan qubi; waa in la adkeysto, si cadawgu u hor cabaado.
Hadaladaa ka dib; waaxaa lagalay doorashadi iyadoo gudidii farsamadu ay soo dhigeen Cabdi naasir Aweys, mana jirin wax la soo garb dhigay dhamaana waa lagu qanacay isagoo helya codkii 100%.
Intaa kadib waxaa lagu soo dhaweyey Ardo koos oo ah gabadh abwaanad reer Ogadenya ah. Waxay ka hadashay Ardo in loo bahan yahay in la muujiyo dadaal dheer iyo isku xidhnaan. Waxay ka hadashay Ardo dhibaatada lagu hayo shacabka gaar ahaan haweenka Ogadenya.
Shirka oo marba marka ka dabaysa aad loo sii xiisonayey ayaa waxaa hees cusub oo qiiro leh ku soo ban dhigay abwaan Cabdirahamaan Siciid oo uu la jiibinayey Maxamed Cabdi Cilmi. Midhah heesta ayaa waxaa ka mid ahaa;
Dhalintii Dalkeygoow – Hadaad Maanta Dhoofteen – War Miyaydun Dhimateen.
Heesta oo ahayd mid aad u qiimi badan dib ayaan idinka daawadsiin doona hadii Alle idmo. Waxaa kadib khudbad koban soo jeediyey xooghayihii cusbaa halgame Cabdi naasir Aways oo ka codsaday xubnaha inay iskaashi iyo wadashaqayn yeeshaan.
Ka dib waxaa la falanqeeyay hawlaha u yaala dhalinyarada OYSU ee Koonfur Afrika iyo qorshaha hawlaha mudan in la qabto. Markii la eegay dhibaatada uu gumaysiga ku hayo shacabka wuxuu ururka OYSU ee Koonfur Afrika Canbarayn laxaadle dhalada kaga tuuray gumasiga Itobiya iyo kuwa u shaqeeya ee gumaadka ba’an ku haya shacbka dulman ee S.Ogadenia.
Si gaar ah wuxuu ururka u canbaarayn hayaa maxaysatada loo yaqaano hawaarin (Liyu Police) een u kala aabayeelin gumaadka ay ku hayaan yar iyo waayeel, gaar ahaan ardayda oo ah dad aad ugu nugul xabsiga iyo jidhdilka.
Ururku waxa uu dhaleecayn aan la soo koobi karin shirka uga gudbin hayaa kuwa isku magacaabaya jaliyada Itobiya ee K.Afrika oo soo gaadhay maalmihii la soo dhaafay waddaanka.
Wuxuu shirka bogaadin u soo jedineynaaa jaaliyada JOKA oo talaabo firifircoon ka qaadatay furida xafiiskan.
Omar Jigjiga – ONA/KA
waa tallabo wanaagsan, qaybna ka ah dadaalka ay ky jiraan dhalinta OYSU guud ahaan daafaha caalamka,
halgamayaashii soo wadey shaqada allaah ha ka abaal mariyo halkaasna ha ka sii giijiyaan, kuwa eega qabtayna allaah ha ku garab galo.